Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Ukwaphulwa kweendaba zeSeychelles » I-Seychelles ivula ukuya eMzantsi Afrika
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphulwa kweendaba zeSeychelles • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
I-Seychelles ivule kwakhona kubakhenkethi base Mzantsi Afrika
Iindwendwe ezivela eMzantsi Afrika ziya kuphinda zikwazi ukukhwela iinqwelomoya ukuya kwiziqithi zeparadesi zaseSeychelles ukusukela ngoMvulo, nge-13 kaSeptemba.
Abakhweli abavela eMzantsi Afrika, abagonyiwe okanye abangagonywanga, baya kuvunyelwa ukuba bangene kwezi ziqithi ngaphandle kwesidingo sokwahlukana xa befika.
Ukungena kunye nokuhlala iimeko aziyi kuchaphazeleka yimeko yokugonywa ye-COVID-19.
Abakhenkethi bakhuthazwa ngamandla ukuba bagonywe ngokupheleleyo phambi kokuhamba kwaye kuya kufuneka banike ubungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19 PCR olwenziwe kwisithuba seeyure ezingama-72 zokumka.
Kumangenelo akutsha nje okungena kwezeMpilo kunye nokuHlaliswa kweeMeko zabaHambi (V3.5), uMzantsi Afrika uyasuswa kuluhlu lwaseSeychelles “lwaMazwe aThintelweyo,” nto leyo ethetha ukuba abakhweli abasuka eMzantsi Afrika, abagonyiwe okanye abangavunyelwa, baya kuvunyelwa ukuba bangene kwezi ziqithi ngaphandle imfuno yokuvalelwa yedwa ekufikeni.
Ngokwengcebiso, ukungena kunye nokuhlala iimeko aziyi kuchaphazeleka yimeko yokugonywa yi-COVID-19, kodwa iindwendwe ziyakhuthazwa ngamandla ukuba zigonywe ngokupheleleyo ngaphambi kohambo. Abakhweli kuya kufuneka banike ubungqina bovavanyo olubi lwe-COVID-19 PCR olwenziwe ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokuhamba kwaye Gcwalisa iSigunyaziso soKhenketho lwezeMpilo. Kuya kufuneka banike ubungqina bentshurensi yokuHamba neMpilo efanelekileyo yokugubungela ukubekwa bucala okunxulumene ne-COVID-19, ukubekwa wedwa okanye unyango.
Iindwendwe ezisuka eMzantsi Afrika zihlangabezana nale migaqo ingentla, ngelixa zikhona eSeychelles, hlala nakweyiphi na indawo eqinisekisiweyo yokhenketho ngaphandle kobude obude bokuhlala kwindawo yokuqala. Akukho mfuneko yokuba bathathe uvavanyo lwe-PCR yovavanyo lweSuku 5. Imiqathango yokuhlala yabantwana ukuya kuthi ga kubudala beminyaka eli-2, nokuba ithini na imeko yabo yokugonya, iya kuba yeyomzali / umgcini ohamba nabo. Iindwendwe ebezise-Bangladesh, Brazil, India, Nepal kunye / okanye ePakistan, amazwe ahlala kuLuhlu oluThintelweyo, kwiintsuku ezili-17 ezidlulileyo, nangona kunjalo, abavumelekanga ukungena eSeychelles.
Abasemagunyeni kwezokhenketho kwiziqithi zoLwandlekazi lwaseIndiya bazamkele ezi ndaba, noMphathiswa Wezangaphandle nezoKhenketho uSylvestre Radegonde esithi uyakuvuyela ukuvulwa kwakhona kweemarike kunye “namathuba athi abonelelwe yile marike ibalulekileyo, ikakhulu kwindawo yokuloba iintlanzi, kunye ngaphaya koko kwintengiso yoMzantsi Merika. Ngaphezulu kwama-71% abemi bethu abagonywe ngokupheleleyo kunye nokugonywa kwabakwishumi elivisayo kwiminyaka eli-12 ukuya kweli-18 eqhubeka kakuhle, iSeychelles yenza konke okufunekayo ukugcina abemi bayo kunye nabatyeleli bayo bekhuselekile. ”
I-Seychelles yindawo ekufunwa kuyo ngabemi boMzantsi Afrika, indawo ekurekhodwe kuyo ngaphezulu kwe-14,355 ngo-2017. Ubhubhane kunye nezithintelo ezalandelayo ziye zathintela ukuhamba kwaye zivelisa i-12,000 yeendwendwe ngaphambi kwesifo ngo-2019, abafikayo behla baya ngaphantsi kwama-2,000 218 kunyaka ophelileyo kwaye 5 ukusukela nge-XNUMX kaSeptemba kulo nyaka.
Ngelixa ulikhoboka lamanxweme kunye namachibi okudada, abahambi base Mzantsi Afrika banomdla kakhulu, kwaye bathanda ukuzibandakanya kwiindlela zendalo, ukunyuka intaba, ukukhwela i-snorkeling, ukuntywila, ukuhamba ngomkhumbi, banomdla wokudibana nabantu basekuhlaleni kwaye bathathe inxaxheba kwimicimbi yenkcubeko ngelixa bekwiholide.
Ukususwa kwezithintelo kukwindaba ezimnandi kwinani elibalulekileyo labanini bamakhaya beSiqithi i-Eden abahlala eMzantsi Afrika ngoku abazokwazi ukubuyela eSeychelles neentsapho zabo.
UDavid Germain, uMlawuli weNgingqi yase-Seychelles ye-Afrika kunye neMelika ozinze eKapa usibulisile ngovuyo esi sibhengezo. “Ziindaba ezimnandi ezi, ukufika kwabakhenkethi boMzantsi Afrika babuyela kunxweme lwethu kudala kulindelwe. Abahambi bafuna ukuhlala bekhuselekile kwindawo ecocekileyo ngeli xesha leholide kwaye yeyiphi indawo ebhetele kuneSeychelles ngeli xesha lokungaqiniseki. Abasebenza kwezokhenketho kunye nabasebenzi babo bonke baqeqeshiwe ukunciphisa kunye nokunciphisa umngcipheko obangelwa yi-COVID-19, ukuphuhlisa iinkqubo ezisemgangathweni zokusebenza ngentsebenziswano nabasemagunyeni kwezempilo, ukufumana isatifikethi esikhuselekileyo se-COVID. EMzantsi Afrika uqobo, ugonyo lwabantu baseMzantsi Afrika sele luqalile kwaye luyaqhubeka kwilizwe lonke, kwaye oku kubangela ukuzithemba ekuhambeni, ”utshilo.
IOfisi yeSeychelles yoKhenketho eMzantsi Afrika ikulungele ngemisebenzi yentengiso eyenzelwe ukuba yenzeke eMzantsi Afrika nakwamanye amazwe aseAfrika kwezi nyanga zimbalwa zizayo. "Oku kuyakuquka uthotho lwezorhwebo kunye nemisebenzi yabathengi, kunye ne" Seychelles Africa Virtual Roadshow "yeyona nto iphambili, ukubonelela ngeemveliso kunye neenkonzo kunye nokuhlaziywa okubalulekileyo kwezokuhamba kuluntu lwaseAfrika lwezorhwebo lokuhambela eSeychelles," Mnu. Ucacisile uGermain. Uthotho lwe “Seychelles yoQeqesho oluFanelekileyo lokuFikela,” iihambo zokushicilela kunye nohambo lokuqhelana nokwazi urhwebo eSeychelles zicwangciselwe uNovemba, kunye nemikhankaso yentengiso yabathengi, kunye nemizamo yokuthengisa ngokubambisana nentsebenziswano kurhwebo loMzantsi Afrika.
Iinkcukacha ezigcweleyo malunga neemfuno, zonke iindwendwe kufuneka zibonisane Iingcebiso.seychelles.travel kwaye seychelles.govtas.com nangaphambi kohambo.
Ngayo nayiphi na imibuzo eyongezelelweyo, nceda unxibelelane [imeyile ikhuselwe] or [imeyile ikhuselwe]
Impendulo kwiphakheji yokunceda uKhenketho lwaseIndiya ngokukhawuleza kwaye ...